I-MateBook X, ilaptop entsha kaHuawei ngoku isemthethweni kwaye ijongeka ngokungathi siyayazi ... | Ndisuka mac
Namhlanje, ilaptop entsha kaHuawei, iMateBook X, yatyhilwa ngokusemthethweni. Le khompyuter ngokucacileyo inayo Windows 10 inkqubo yokusebenza inika umsebenzisi umoya omtsha ngokweenkcukacha kwaye ngaphezulu kwako konke kufana ncam noyilo olusebenzayo lwe-Apple's 12-inch MacBook. Ayisiyonto siyicwangcisileyo ukusukela ekuboneni kokuqala ungabona ukuba ezi zixhobo zintsha zivela kwinkampani yaseTshayina zijongeka njenge-Apple's Mac kwaye ayiyonto imbi, ilungile ngenxa yezizathu ezininzi. Ngayiphi na imeko, siza kujonga ngakumbi kwezi MateBook X zintsha ezifika kumzuzu ophambili kubasebenzisi.
Ayizizo ii-laptops zokuqala zikaHuawei, ifemu sele inayo iMateBook yayo unyaka kwaye kuyacaca ukuba le nguqulo iyayiphucula eyangaphambili, nangona ilandela umgca ophawuliweyo ngokoyilo nakwizinto zokwakha zezixhobo. Isikrini siba sikhulu kwaye sikhula ukusuka kwi-intshi ye-12 ukuya kwi-13 ngaphandle kokunyusa ubungakanani bezixhobo., eqhubeka nokubonelela ngemilinganiselo efanayo nescreen se-88% kwifomathi ye-3: 2.
1 Ukucaciswa kweMateBook X
2 Ixabiso lale Huawei MateBook X
Ukucaciswa kweMateBook X
Ukongeza kwiscreen esikhudlwana, sifumanisa ukuba la maqela anesikrini esivula ukuya kuthi ga kwiidigri ezili-178, ezenza ukuba iqela liyonwabele ngeendlela ezahlukeneyo, kodwa ukongeza koku, iqela lizisa:
Isikrini esili-13-intshi 2K esele sikhankanyiwe (2,160 x 1,440 pixels, a density of 200 dpi) and Gorilla Glass protection
Isizukulwana esilandelayo Intel Core i5 okanye iprosesa yosapho ye-i7
Imemori ye-RAM ye-4 ukuya kwi-8 GB
Imemori yangaphakathi ukusuka kwi-256 GB ukuya kwi-512 GB
Ubunzima be-1.05 kg
Imizobo Intel HD Graphics 620
Ikhamera engaphambili eyi-1 megapixel
Isandi seDolby Atmos ngeemakrofoni ezimbini kunye nezithethi zestereo
Isinxibelelanisi sejack se3.5mm
Ibhetri yesi sixhobo yi-41,4Wh ukuba inkampani yeHuawei ilumkise ukuba inokuhlala iiyure ezili-10 ichitha ividiyo, kodwa konke oku kufanele kubonwe ngokuthe ngqo kuba kunzima ukufumana ukuzimela kwezixhobo ezikhoyo. Isinxibelelanisi sokutshaja kunye nezibuko kuphela lezixhobo ezisebenzisa isixhobo se-USB-C Kwaye itshaja ngokwayo ayinkulu kunaleyo yezixhobo zeselfowuni. Yintoni egqithisile IHuawei yongeza iMateDock2 eyandisa eli zibuko linye nge-HDMI, enye i-USB-C, i-USB-A kunye neVGA.
Kupholiso lwezi zixhobo iHuawei iveza inkqubo Itekhnoloji yokupholisa indawo yeHuawei. Le nkqubo ishiya izixhobo zingenabalandeli njengezinye izixhobo kwaye ukuba iphunyezwe kakuhle akufuneki ibenangxaki yaluphi na uhlobo, kodwa siyagxininisa ukuba kufuneka yenziwe kakuhle kwaye iphunyezwe ukuze izipholise kakuhle izixhobo kwaye ayibangeli umonakalo, ngakumbi kwiiyure ezinde zokusebenza apho ezi MateBook X zinokufakwa khona kwaye zithathela ingqalelo amandla eprosesa kunokwenzeka ukuba oku kuyonyusa ubushushu ngokunjalo. Sishiya ividiyo encinci apho ifemu yaseTshayina isibonisa ukusebenza kwale Tekhnoloji yokupholisa indawo:
Itekhnoloji yokupholisa indawo isetyenziswe kwicandelo le-aerospace kwaye sele isetyenzisiwe kuthi #HuaweiMateBook! Bukela okuninzi ...#ShishiniStyled pic.twitter.com/Ph73OcpMZi
-Huawei Iselula (@HuaweiMobile) Meyi 23 ye2017
Ixabiso lale Huawei MateBook X
Ikhompyutheni evela kwinkampani yaseTshayina iya kufumaneka ngemibala emithathu esikhumbuza "izixhobo ezithile" esizibonileyo ngamanye amaxesha ... La maqela mathathu anokufezekiswa ngezinto ezintathu ezinokwenzeka Ixabiso lalo liqala kwi-1.400 euro yemodeli esisiseko kunye iprosesa ye-Intel i5, i-8GB ye-RAM, i-256GB ye-SSD:
i5 - 8GB - 512GB SSD ye- € 1.599
i7 - 8GB - 512GB SSD ye- € 1.699
Ukongeza kule modeli, abanye bazisiwe kumsitho ofanayo ukuba ngokomgaqo sinokubona ngeenkcukacha ezisezantsi kwaye zitshiphu, kodwa asikholelwa ukuba banokuthelekiswa ngokuthe ngqo ne-Apple's 12-intshi MacBook. Ucinga ntoni ngale Huawei MateBook X intsha? Ngaba yimbangi kwi-MacBook ka-Apple?
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Ezahlukeneyo » I-MateBook X, ilaptop entsha kaHuawei sele isemthethweni kwaye ijongeka ngokungathi siyayazi ...